Amakhadi eKrisimesi aSimahla a 11 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lua louro | | Ikhathuni vector
Kakhulu ndivuyisana nonyaka Kwakhona, ukunqwenela iiholide ezimyoli, ukuthumela iiposikhadi kubahlobo bethu abasenyongweni kunye nosapho kuyaqhubeka nokuba sisiko elinyanzelekileyo kwabaninzi.
Kule posi sikuphathela iikhadi zeKrisimesi zasimahla ezili-11 kwifomathi yevektha (ezinye zikwiifomathi ze -ai .ezikhethekileyo zeAdobe Illustrator- kunye nezinye kwii .eps). Oku kuyakuvumela ukuba uguqule ubungakanani babo (bandise okanye ubanciphise) kangangoko ufuna ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho. Inye kuphela into ekufuneka uyivulile iifayile kukuba, kwimeko yabo bakwi .ai, Adobe Illustrator; ezo zikwi .eps zinokuvulwa ngayo nayiphi na inkqubo ye vector (Illustrator, Corel Draw…).
Amakhadi eKrisimesi aSimahla ayi-11
U-2014 wonwabile kakhulu: 626 x 626 px vector image in .ai format, made by eyomileyo.
Ikrismesi emnandi: Umfanekiso weVector ngefomathi ye-500 x 626 px .ai.
2014: Umfanekiso weVector ngefomathi ye-500 x 626 px .ai.
umthi wekrisimusi: Umfanekiso weVector ngefomathi ye-501 x 626 px .ai.
Iiholide zasebusika ezimnandi: Umfanekiso weVector ngefomathi ye-500 x 626 px .ai.
Ikrismesi emnandi 2: Umfanekiso weVector kwifomathi ye-.ai, 500 x 626 px.
I-reindeer enemihlobiso: Umfanekiso weVector kwifomathi ye-.ai, 438 x 626 px.
Ikhadi elinomthi weKrisimesi eyi-3D (kufuneka ubhalise kwaye ungene ukuze ukhuphele): umfanekiso we vector kwifom ye -eps
Ipakethe yeKrisimesi (Kufuneka ubhalise kwaye ungene ukuze ukhuphele): kumfanekiso omnye unemifanekiso eliqela enxulumene neKrisimesi (zonke ezo zinto zibonakala emfanekisweni, ngaphakathi "kwesipho sephakheji"). Unokukhetha into enye kwaye uyincamathisele komnye umsebenzi. Ifomathi .eps
Umthi weKrisimesi ngezaphetha (Kuya kufuneka ubhalise kwaye ungene ukuze ukhuphele): unokutshintsha iLorem Impsum ngombhalo owuthandayo.
Ixhama elihlekisayo (kufuneka ubhalise kwaye ungene ukuze ukhuphele): umfanekiso we vector kwifom ye -eps
Ukuba ufuna ukufumana izixhobo ezingaphezulu zemizobo yoyilo lwakho lweKrisimesi, ungajika uye kwelinye inqaku apho uya kufumana khona Iipakethe zempembelelo zeBokeh.
Iinkcukacha ezithe xaxe - 7 Iipakethe zesiphumo seBokeh ukubandakanya kuyilo lwakho kule Krisimesi.
Imvelaphi Freepik, Iphinde yalungiswa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ikhathuni vector » Amakhadi eKrisimesi ali-11
IiWebhusayithi ezi-3 ezinemizobo yasimahla yevector